Paramende Yozeya Bumbiro Muna Kukadzi
Chipiri, Kukadzi 09, 2016 Local time: 19:49
Nhau / Kodzero-dzevanhu
WASHINGTON— Dare reparamende rave kutarisirwa kuti rizeye nyaya yebumbiro idzva remitemo yenyika kwemazuva maviri musvondo rechipiri raKukadzi bumbiro iri risati raendeswa kureferendamu apo vanhu vachavhota kuti vanorida here kana kuti kwete.
Vari kunyora bumbiro iri vanonzi varipedza neChishanu uye rinonzi ratambirwa nemasachigaro eCOPAC.
Vakuru muhurumende vachapihwa bumbiro iri svondo rinouya kuti vazozeye kuti referendamu yoitwa riinhi.
Mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vari kuEthiopia kumusangano weAfrican Union, ukowo mutungamiri wehurumende, VaMorgan Tsvangirai, vadzoka munyika neChishanu vachibva kuDavos, kuSwitzerland kumusangano weWorld Economic Forum.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC vakamirira MDC-T, VaDouglas Mwonzora, vatenda kuti basa rebumbiro rave kusvika kumagumo.
Mumwe wemasachigaro eCOPAC, VaMunyaradzi Paul Mangwana veZanu-PF, vanotiwo ndima yavo vasakura vakapedza.
Hurukuro naVaMunyaradzi Paul Mangwanai
Misoro yeNhau, Chipiri Kukadzi 09, 2016
Mhuri yaVaItai Dzamara Yoronga Kusangana naVaMnangagwa
VaDzamara, avo vakapambwa nevarume vanofungidzirwa kuti vasori musi wa9 Kurume gore rapera, vari kusvitsa mwedzi gumi nemumwechete musi weChipiri pasina ruzivo rwekwavari.
Somalia: Central bank governor seeks new currency
Kusagadzikana kweZvinhu muMDC yaVaNcube-VaMzila Ndlovu Vanobviswa paChigaro
MDC inotungamirirwa naVaWelshman Ncube yakasangana mukupera kwesvondo yakasunga kuti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri, VaMoses Mzila Ndlovu vabve pachigaro ichi
Hurukuro naVaLovemore Madhuku
Nyaya Ina Tinomudaishe Chinyoka
Hurukuro naVaStanlus Chatikobo
Hurukuro naBishop Ancelimo Magaya
Hurukuro naVaKurauone Chihwayi
Most ViewedNyaya yaVaMugabe Yekuti AU Ibude muUN Yokonzera MutauroHurumende Inotara Nzara seDambudziko Rakakurisisa MunyikaMabhanga Maviri muZimbabwe Anobviswa paZvirango Zvakatemerwa neAmericaMuchuchisi Johannes Tomana VochuchiswaVaTsvangirai Vanoti Nhaurirano Hadzisati Dzatanga Pakati peMapato Anopikisa